Hamabalyo Ku Socta Guddomiyaha Cusub Ee Haayada Shaqaalaha Dawlada Somaliland Md Farxaan Aadan Haybe.
Tuesday April 02, 2019 - 08:44:00 in Articles by Hadhwanaag News
Waxaan Dhanbaal Hambalyo iyo bogaadin oo aan la soo koobin Karin u diray wasiirkii hore ee wasaarad duulista
Waxaan Dhanbaal Hambalyo iyo bogaadin oo aan la soo koobin Karin u diray wasiirkii hore ee wasaarad duulista iyo hawada Somaliland ee xukuumadii Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo madaxweynaha Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi u magacaabay Guddomiyaha Haayada Shaqaalaha Dawlada Somaliland.
Md Farxaan Aadan Haybe Waa xeeldheere mudo badan ka soo shaqeenaayey arimaha samafalka ,lana soo shaqeeyey xukuumadihii ugu danbeeyey ee soo maray dalka Somaliland.
Waxaannu Illaahay uga baryeynaa guddomiyaha cusub ee haayada shaqaalaha dawlada inuu xilka Qaran oo culayskiisa leh ku asturo. Waxaannu ku leenahay guddomiyeallaah hakugu asturo xilkaas, Adiguna dedaal oo noqo masuul aan dhayalsan gudashada waajibaadka qaran ee la saaray.
Qore;-Wariye:-Ahmed Cali Fagadhe.